NIO သည် စမတ် လျှပ်စစ် အလတ်စား နှင့် အကြီးစား SUV ES7 ကိုမိတ်ဆက် ခဲ့သည် – Pandaily
NIO သည် စမတ် လျှပ်စစ် အလတ်စား နှင့် အကြီးစား SUV ES7 ကိုမိတ်ဆက် ခဲ့သည်
Jun 15, 2022, 22:43ညနေ 2022/06/15 23:01:38 Pandaily
တရုတ် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်သူNIO သည် ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် ကုန်ပစ္စည်း မိတ်ဆက် ပွဲကျင်းပ သည်ဤ အချိန် အတောအတွင်း ကုမ္ပဏီသည် နောက်ဆုံးပေါ် စမတ် လျှပ်စစ် အလတ်စား SUV-ES7 ကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ES8, ES6 နှင့် EC6 ၂၀ ၂၂ ကိုစတင် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
NIO သည်၎င်း၏ ထူးခြားသော SUV ဒီဇိုင်းနှင့် ရှုပ်ထွေးသော ဘီး မုတ် များကို တီထွင် ခဲ့ပြီး ES7 ၏ လမ်း တည်ရှိ မှုကို တွန်းအားပေး သည်။ Double-dash DRL display သည် ES7 ၏ရှေ့ တွင် “ air wing” taillight ကိုထည့်သွင်း ထားပြီး အမြင်အာရုံ အကျယ် ကိုတိုး စေသည်။
2960mm ဘီး အခြေစိုက်စခန်း သည် ES7 အတွက် ကျယ်ဝန်း သည့် cockpit တစ်ခု ပေးသည်။ ရှေ့ အခန်း တွင် S-shaped dashboard နှင့် Karuun ရေရှည်တည်တံ့ သော Rattan ကိုတိုးချဲ့ သည်။ ES7 ၏ရှေ့ ထိုင်ခုံ များသည် အပူ ၊ လေဝင်လေထွက် နှင့် အနှိပ် ခံ နိုင်စွမ်း ရှိသည်။ အပူပေး နောက် ထိုင်ခုံ များသည် စံ ဖြစ်ပြီး ၂၃ ဒီဂရီ မှ ၃၁ ဒီဂရီ အကြား ပါဝါ ချိန်ညှိ နိုင်သော ထိုင်ခုံ ကျောထောက်နောက်ခံ ရှိသည်။
“ Evolutionary Smart Technology NIO Digital System” ကိုလည်း ပွဲဦးထွက် ပြသ ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတွင် အသိဉာဏ်ရှိသော ဟာ့ဒ်ဝဲ ၊ ကွန်ပျူတာ ပလက်ဖောင်း ၊ လည်ပတ်မှု စနစ်၊ အသိဉာဏ်ရှိသော algorithms နှင့် အသိဉာဏ်ရှိသော application များပါဝင်သည်။ NIO ဒစ်ဂျစ်တယ် စနစ်သည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုး ရေးကို ပေါင်းစည်း သော ဂေဟစနစ် တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြသည်။ Banyan သည် NT2 ပလက်ဖောင်း ပေါ်တွင် စမတ် လည်ပတ် မှုစနစ် ဖြစ်ပြီး NIO ၏ Aquila Super Sensing နှင့် Adam Super Computing တို့သည် စမတ် ဟာ့ဒ်ဝဲ နှင့် ကွန်ပျူတာ ပလက်ဖောင်း များ ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ထို႔အျပင္ ES7 ကို ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ ေသာ ေနာက္ဆံုး ေပၚ ကိုယ္ပိုင္ ေမာင္းႏွင္ မႈ (NAD) ႏွင့္အတူ ပို႔ေဆာင္ ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အဝေးပြေး လမ်းမ ကြီး၊ မြို့ပြ, ရိ ယာ၊ ကားရပ်နား ရန် နေရာနှင့် ဘက်ထရီ ပြောင်းလဲ ခြင်းစသည့် မြင်ကွင်း များတွင် လုံခြုံ ပြီး စိတ်ချ ရသော ကိုယ်ပိုင် မောင်းနှင်မှု အတွေ့အကြုံကို တဖြည်းဖြည်း နားလည် လာ လိမ့်မည်။
ES7 စံ သည် AR/VR နှင့်လိုက်ဖက် သော ဒစ်ဂျစ်တယ် console စနစ် ဖြစ်သော PanoCinema တပ်ဆင်ထားသည်။ NIO နဲ႔ တီထြင္ ဆန္းသစ္ တဲ့ AR Device ကုမၸဏီ Nreal တို႔ဟာ ထိေရာက္တဲ့ 201 လက္မ မ်က္ႏွာျပင္ ကို ၆ မီတာ အရွည္ မွာ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္မယ့္ Custom AR Glasses ေတြကို တီထြင္ ထုတ္လုပ္ 256 အရောင် ဒစ်ဂျစ်တယ် ရေတံခွန် ပတ်ဝန်းကျင် အလင်းရောင် နှင့် 7.1.4 Dolby Atmos ဝန်းကျင် အသံ စနစ် နှင့်အတူ PanoCinema ES7 ၏ သီး သန့် အာကာသ အတွင်း အသုံးပြု သူများအတွက် စွဲ လန်း အမြင်အာရုံ နှင့် အသံ အတွေ့အကြုံကို ဆောင်ကြဉ်း ပါလိမ့်မယ်။
ES7 သည် SiC power module များပါ ၀ င်သည့် ဒုတိယ မျိုးဆက် E-drive ပလက်ဖောင်း ကိုလည်း အမွေဆက်ခံ ခဲ့သည်။ ယာဉ် သည် ၀ မှ ၁၀၀ ကီလိုမီတာ မှ ၃. ၉ စက္ကန့် အတွင်း မောင်းနှင် နိုင်ပြီး ၁၀၀ မှ ၀ ကီလိုမီတာ မှ ၃၃. ၉ မီတာ အတွင်း ဘရိတ် နိုင်သည်။ ES7 ၏ ခုခံ ကိန်း သည် ၀. ၂ ၆၃ အထိ နိမ့်ကျ နိုင်သည်။ ES7 ၏ CLTC သည် 75 kWh standard မိုင် အကွာအဝေး ဘက်ထရီ အောက်တွင် ၄ ၈၅ ကီလို မီတာ၊ ၁၀၀ kWh ဘက်ထရီ တွင် ၆ ၂၀ ကီလိုမီတာ နှင့် 150 kWh စူပါ ရှည်လျားသော ဘက်ထရီ တွင် ၈၅၀ ကီလိုမီတာ အထိရှိသည်။
ES7 မွာ 75kWh ဘက္ထရီ တပ္ဆင္ ထားၿပီး ေထာက္ပံ့ ေငြ မေပးဘဲ ယြမ္ ၄၆ ၈၀၀၀ (ေဒၚလာ ၆၉, ၆ ၈၅) ကေန စတင္ ေရာင္းခ် မွာျဖစ္ပါတယ္။ 100kWh ဘက္ထရီ တပ္ဆင္ ထားတဲ့အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး မတုိင္မီ ေစ်း ႏႈ န္းက ယြမ္ ၅ ၂၆, ၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ES7 Excellence အတွက် မူ ထောက်ပံ့ငွေ မတိုင်မီ ယွမ် ၅၂ ၈၀၀၀ ဖြင့် ရောင်းချခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူ ပေးပို့ မှုကို သြဂုတ်လ ၂၈ ရက် တွင်စတင် မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
2022 ES8, ES6 နှင့် EC6 မော်ဒယ် များသည် NIO ၏ Alder digital system တပ်ဆင်ထားသည်။ အဆင့်မြှင့်တင် မှုများတွင် digital console Controller များ၊ တိုးမြှင့် ထားသော ကွန်ပျူတာ/အာရုံခံ နိုင်စွမ်း ရှိသော sensor hardware နှင့် အနာဂတ် အင်္ဂါရပ် များအတွက် ပိုမို ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် တို့ပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင် NIO သည် ES8 Landmark Pilot ခြောက် ထိုင်ခုံ အပြင် အဆင် နှင့် သီးသန့် ဒီဇိုင်း အထုပ် ကို ကြေငြာခဲ့သည်။
NIO ရဲ့ SUV ကား သစ် ES7 ကို ဧပြီလ လယ် လောက်မှာ ထွက်ရှိ
တရုတ် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်သူ NIO Inc. ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ ပူးတွဲ တည်ထောင်သူ ဖြစ်သူ Qin Lihong က NT 2.0 ပလက်ဖောင်း ကို အသုံးပြုတဲ့ အလတ်စား နဲ့ အကြီးစား SUV ကား တစ် စီးကို ဧပြီလ လယ် လောက်မှာ ဖြန့်ချိ မယ်လို့ အင်္ဂါနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ တစ်ခုမှာ ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။